Agaasimahii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta hoballada waaberi oo xilka ku wareejiayay agaasimaha cusub – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Agaasimahii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta hoballada waaberi oo xilka ku wareejiayay agaasimaha cusub
Muqdisho-(SONNA)- Agaasimahii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta Hoballada waaberi , Maxamed Xasan Barroow, ayaa Maanta xilka ku wareejiayay agaasimaha cusub ee hay’addaasi, Nimcaan C/raxmaan Xasan oo la dhowaan la magacaabay.
Munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa, Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, maareeyaha golaha murtida iyo wacyigalinta agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafintaiyo agaasime waaxeedyada Wasaaradda.
Agaasimahii hore ee wax soo saarka iyo howlgelinta hoballada waaberi iyo agaasimaha cusub ayaa isdhaafsaday saxiixyada decumiintiyada iyo agabyadii ay fanaaniintu ku shaqeyn jireen, iyagoo halkaasi isugu hambalyeeyay.
Agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo howl gelinta Hoballada Waaberi hadana ah la taliyaha wasaaradda warfafainta dhaqanka iyo dalxiiska ee arrimaha horumarinta Fanka iyo isku xidhka Kooxaha heer Qaran, Maxamed Xasan Barrow, ayaa sheegey inuu ku faraxsanyahey xilka wareejinta lana shaqeyn dooni agaasimaha cusub.
Nimcaan Cabdiraxmaan xasan (hillaac) , agaasimaha cusub ee wax soo saarka iyo howl gelinta Hoballada Waaberi ayaa sheegey halkii uu keeney waabari Maxamed Xasan Barow inuu kasii dhaqaajin doono, wuxuuna ka codsaday bahda fanka in ay garab istaagaan, kana caawiyaan xilka loo igmaday.
Maareeyaha golaha murtida iyo wacyi galinta Qaranka , Maxamed Abuukar Axmed. ayaa sheegey in Agaasime Barrow uu wax badan kasoo maray dib u howl gelinta Hobollada waabari, kadib bur burkii uu Dalku soo maray, Nimcaan hillaacna looga baahan yahay in uu halkaa kasii dhaqaajiyo.
Wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya, Khadiijo Maxmed Diiriye, ayaa sheegtay in ayy xubin ka aheyd waligeed Hobollada waabari, haddana ay kala sheqeyn doonto sidii loo dhaqaajin lahaa horumarinta bahda fanka ee uu Qaranku leeyahey.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya, Mudane; Maxamed Cabdi Xayir (maareeye), ayaa dardaaran guud siiyey mas’uuliyiinta cusub iyo guud ahaan bahda fanka , wuxuuna sheegey fanka Soomaaliyeed iyo fannaaniinta in dib loo soo celin doono Heesihii hirgalay oo tartan furan lagu soo saari doono jiilalka cusub ee fanka kusoo biiraya.